Kedu ka nri ahia dijitalụ si eri nri gị | Martech Zone
Mgbe ulo oru na-enyocha ihe ire ere ha, ihe ha na-agbali ime bu ighota nke oma na uzo nke ndi ha choro iji mata ihe ha gha emezu ihe abuo:
size - Ọ bụrụ na ịzụ ahịa nwere ike ịdọtakwu atụmanya ọzọ, ọ ga-ekwe omume na ohere ị ga-eji azụlite azụmaahịa ha ga-abawanye ebe ọ bụ na ọnụego ntụgharị na-anọgidesi ike. Yabụ… ọ bụrụ na m na-adọta atụmanya 1,000 ọzọ na mgbasa ozi ma enwere m 5% ọnụego mgbanwe, nke ahụ ga-ewetara ndị ahịa 50 ọzọ.
Mgbanwe - Na ọkwa ọ bụla na olulu ahịa, ịre ahịa na ire ahịa kwesịrị ịrụ ọrụ iji mee ka ọnụego ntọghata ka ọ nwekwuo atụmanya site na ntụgharị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na m na-adọta otu puku atụmanya ahụ mana enwere m ike ịbawanye ọnụego mgbanwe m na 1,000%, nke ahụ ga-abụzi ndị ahịa 6.
Gini bu ahihia ahia?
Oghere ahịa bụ ihe ngosi nke ọnụ ọgụgụ nke atụmanya yiri ka ị na-ebute ịzụ ahịa na ịzụ ahịa ngwaahịa na ọrụ gị.
Uzo ahia na ire ahia na echegbu onwe ha banyere olulu ahia a, na-ekwukarị olile anya di na ọkpọkọ ịkọwapụta otu ha ga-esi nwee ike ịkọ nzụlite ego ha ga-enweta n'ọdịnihu maka azụmahịa ha.
Na ahia dijitalụ, itinye n'ọnọdụ n'etiti ahịa na ahịa dị oke mkpa. Enwere m mmasị na nkwupụta a sitere na pọdkastị m na-adịbeghị anya:
Ahịa na-agwa ndị mmadụ okwu, ahịa na-arụ ọrụ na ndị mmadụ.
Aha ya bụ Kyle Hamer
Gị ahịa ọkachamara na-enwe bara uru mkparịta ụka na atụmanya na kwa ụbọchị. Ha ghọtara nchegbu nke ụlọ ọrụ ha yana ihe kpatara ụlọ ọrụ gị nwere ike tufuo azụmahịa na ndị asọmpi. Tinyere nyocha na nyocha nke mbụ na nke abụọ, ndị na-ere ahịa nwere ike iji ozi ahụ wee zụọ ahịa ahịa dijitalụ ha… na-ahụ na atụmanya na ọkwa ọ bụla nke olulu ahụ nwere ọdịnaya na-akwado ya iji nyere atụmanya ahụ aka ịgbanwe na ọkwa ọzọ.
Oge egwuregwu a na-ere: Otu Dijitalụ Azụmaahịa Na-azụ Ha
Ka anyị na-elele ndị na-ajụ ase na ọwa niile anyị nwere ike itinye anya na atụmatụ azụmaahịa anyị dum, enwere atụmatụ ụfọdụ akọwapụtara nke anyị nwere ike itinye iji bulie ma melite ọkwa ọ bụla nke olulu ahịa.
Mgbasa ozi na akwụ ụgwọ mgbasa ozi mee ka ị mara ngwaahịa na ọrụ azụmaahịa gị na-enye. Mgbasa ozi na-enyere ndị ahịa gị aka iji ndị na-ege ntị na ndị otu lekwasịrị anya ịkpọsa ma wulite mmata. Ndị otu egwuregwu gị nwere ike iwepụta ọdịnaya na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali nke a na-akọrọ ma na-eme ka ị mata ihe. Ndị otu mmekọrịta gị na ọha na-eme ka ndị na-eme ihe ike na ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji ruo ndị mmadụ ọhụrụ wee wulite mmata. Nwedịrị ike ịchọrọ ịdebe ngwaahịa na ọrụ gị maka onyinye iji mee ka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na mbipụta mara.
Kedu ka ndị mmadụ si enwe mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na-egosi mmasị? N'oge a, ha na-agakarị ihe omume, na-ekere òkè na otu ụlọ ọrụ, na-edebanye aha na akwụkwọ akụkọ na-enye aka, na-agụ isiokwu, ma na-achọ Google maka nsogbu ha na-achọ maka azịza ya. Enwere ike igosi mmasị site na ịpị site na mgbasa ozi ma ọ bụ ntụgharị nke na-eweta atụmanya na weebụsaịtị gị.
Tụle ngwaahịa gị bụ ihe inyocha ihe ndị achọrọ, ọnụ ahịa ya, na aha ụlọ ọrụ gị yana ndị asọmpi gị. Nke a bụkarị ọkwa ahịa azụmaahịa bidoro itinye aka na azụmaahịa ruru eru (MQL) gbanwere n'ime ahịa ruru eru (SQL). Nke ahụ bụ, o yikarịrị ka atụmanya dabara na profaịlụ omume igwe mmadụ gị na nke siri ike ka ị na-ejide ugbu a dị ka ndị na-eduga ma ndị ahịa gị na-eme ka ha tozuo iji nwee ike ịzụta ma bụrụ nnukwu ndị ahịa. Nke a bụ ebe ahịa dị ịtụnanya, na-enye usoro eji eme ihe, na-enye azịza, ma na-akụda nchegbu ọ bụla sitere n'aka onye zụrụ ahịa.
N'uche m, ebumnuche ebumnuche bụ ihe kachasị mkpa site na oge. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọrụ ọchụchọ na-achọ azịza, ịdị mfe nke ị na-ejide ozi ha ma mee ka ndị ọrụ ahịa gị chụsoo ha dị oke mkpa. Nnyocha ahụ ha jiri mee ka ebumnuche ha na-achọ ihe ngwọta. Oge nzaghachi iji nyere gị aka dịkwa oke egwu. Nke a bụ ebe pịa-oku, nzaghachi ụdị, bọọlụ nkata, na bots dị ndụ na-enwe mmetụta dị ukwuu na ọnụego ntụgharị.
Ntụle bụ oge ahịa na-anakọta ọtụtụ ozi ha nwere ike iji mee ka atụmanya ahụ dị jụụ na ị nwere azịza ziri ezi. Nke a nwere ike ịgụnye atụmatụ na nkwupụta nke ọrụ, mkparịta ụka ọnụahịa, nkwekọrịta ọbara ọbara, na ịkọwapụta nkọwa ndị ọzọ ọ bụla. Akụkụ a toro site na ntinye nkwado maka afọ ole na ole gara aga - gụnyere akara ngosi dijitalụ na ịkekọrịta ederede na ntanetị. Ọ dịkwa mkpa na azụmahịa gị nwere nnukwu aha na ntanetị ka ndị otu ha na-ewu ụlọ ga-egwu ala ma na-enyocha ụlọ ọrụ gị.
Usoro nzụta enweghị nkebi dị oke mkpa maka nyocha ecommerce maka ndị ahịa dị ka ọ dị maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Inwe ike ịkwụ ụgwọ na ịnakọta ego ngwa ngwa, ịkọkọrịta ahụmịhe nke ụgbọ mmiri, izipu mbupu ma ọ bụ atụmanye ntinye, na ịkwaga atụmanya ahụ n'ime ndị ahịa ga-adị mfe ma zie ozi ọma.
Kedu ihe ndị ahịa na-ereghị na ya?
Cheta, uche nke olulu ahịa na-eme ka atụmanya bụrụ onye ahịa. Ọ naghị agakarị na agbanyeghị na ndị otu ahịa ọgbara ọhụrụ na ndị ahịa azụmaahịa na-anabata ahụmịhe ndị ahịa na mkpa njigide ndị ahịa.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na olulu ahịa a bụ ihe nlere anya nke mbọ ndị otu gị na azụmaahịa otu gị… ọ bụghị ihe na-egosipụta nke n'ezie ndị na-azụ ahịa njem. Dị ka ihe atụ, onye na-azụ ihe nwere ike ịgagharị na njem ha. Dịka ọmụmaatụ, atụmanya nwere ike ịchọ ngwọta iji jikọta ngwaahịa abụọ n'ime.
N'oge ahụ, ha na-achọta akụkọ nyocha banyere ụdị ikpo okwu ha na-achọ ma chọpụta gị dị ka azịza nwere ike. Nke a malitere ime ka ha mata n’agbanyeghi na ha bu n’obi.
Echefula yers buyers na-akpụ akpụ ọzọ na ndị ọzọ ka onwe-ọrụ Filiks na-eleru ha ọzọ zuo. Maka nke a, ọ dị oke mkpa na nzukọ gị nwere ọbá akwụkwọ ọdịnaya zuru ezu iji kwado ha na njem ha na iji mee ka ha gaa nzọụkwụ ọzọ! Ọ bụrụ n'ịrụ nnukwu ọrụ, ohere ị ga-erute ma tụgharịa karịa ga-eme.
Tags: b2b onu mmiriechichenyochanzubemmasịzuoNkwado ire ahịaụlọ nkwonkwo ahịaahịa foneelu nkebisqlKedu ihe eji ere ahịa
Etu esi esochi peeji 404 achọtaghi njehie na Google Analytics